Waa maxay sababta Dhabarkaaga PR uu kuu Fashilinayo | Martech Zone
Waa maxay sababta Dhakhtarkaaga PR uu kuu Khasaaray
Jimco, Diisambar 23, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In kasta oo aan ku qanco doodda tweet-ka marba marka ka dambaysa, mar kasta oo ay tahayba waxay mudan tahay in la wadaago wadahadalka halkan oo aan ka sii doodno. Tusaalaha aan maanta bixinayo wuxuu ka bilaabmay warsaxaafadeed aan kala shaqeynay Dittoe PR si aan ugu dhawaaqno cusub website.
PRDude… iskiis isu magacaabay difaac ee warshadaha xiriirka dadweynaha oo gashan magaca qarsoodiga (istiraatiijiyad weyn oo bulsheed), ayaa qaatay war-saxaafadeed hawsha maxaa yeelay kuma haboone aragtidiisa waxa a war-saxaafadeed waa in loo adeegsadaa for news. Waxaan kuu ogolaanayaa inaad akhriso wadahadalka:
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah mid ka mid ah sababaha aan ugu raaxeysanno inaan wax badan la shaqeyno Sida caadiga ah PR waa inay garwaaqsadaan in dadaalkooda xiriirka dadweynaha uu yahay mid kamid ah istaraatiijiyada suuq geynta guud. Waxaan ka shaqeynay macaamiil dhowr ah waxaanan helnay natiijooyin gaar ah adoo ka faa'iideysanaya war-saxaafadeedyada raadinta adag iyo istiraatiijiyadda ka-qaybgalka bulshada. War-saxaafadeedkan gaarka ahi waa tallaabo keliya oo ka mid ah istiraatiijiyadda guud ee aannu ugu gudbineyno dadweynaha.
Waa wax laga xumaado in noocyada PR-dugsiyadii hore sida PRDude aysan fahmin suuq geynta, soo-celinta is-beddelka, istiraatiijiyadda bogga soo degida, sumadda, wacyigelinta, mashiinka raadinta… mararka qaarkoodna xitaa ma ogaadaan dhammaan faa'iidooyinka istiraatiijiyad weyn. Mid ka mid ah shirkadaha PR ee ugu waawayn magaaladeena dhawaan la xiray… wershadaha ayaa is badalaya mana sii wadi kari waayeen. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay PRDude difaacaya.
Adoo ku dhajinaya arrintan - in kasta oo wax laga xumaado - PRDude waxay bixisay caddayn aad u badan oo ah in war-saxaafadeedkeennu uu ahaa guul Waan jeclahay xaqiiqda ah inuu qirayo inuu ka helay sii deynta meel weyn bogga Google News. Taasi waa wax laga naxo! Waxaan si cad u gaarnay dhagaystayaal aanan horay u helin - oo ah ujeedo ah qeybintayada PR. (Arrin xiiso leh ayaa ku filan, waxay umuuqataa qaybintayada maxalliga ah inay si uun udhacday bogagga qaarkood.) Waxaan helnay daraasiin tweets ah iyo websaydhyo ku xusan sii deynta.
War-Saxaafadeed kuma eka qoraal ahaan "warar" dambe. Warshadaha PR-ga way isbadaleen… laakiin waxay ka tegayaan qaar ka mid ah xirfadlayaasheeda PR. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay raadinayaan macluumaad iyagoo adeegsanaya matoorada raadinta, sidaa darteed helitaanka goob joogitaanka raadinta waa lagama maarmaan. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay ku hawlan yihiin bulsho ahaan, sidaas darteed yeelashada istiraatiijiyad bulsho waa lagama maarmaan. Si kastaba ha noqotee, ganacsiyo badan iyo ilaha warbaahinta wali waxay ku tiirsan yihiin adeegyada qaybinta wararka si ay u helaan macluumaadka ay raadinayaan - marka warsaxaafadeedyadu si fiican ayey u shaqeeyaan.
A war-saxaafadeed sifiican ufiican iyadoo qaybinta weyn laga heli doono backlinks-ka bogagga leh awood sare iyo ku-habboonaanta warshadahaaga. Waxaan ku aragnay culeys badan oo ku saabsan warsaxaafadeedyada macaamiisheenna, waxaan aragnay darajadooda oo hagaageysa, waxaana helnay hoggaamiyeyaal badan iyaga oo ka faa'iideysanaya.
Waxaan sii wadi doonaa inaan la shaqeeyo a shirkadda xiriirka dadweynaha ee horumarka leh Taasi waxay sii socotaa aniga iyo macaamiishayda inay helaan fursado aan caadi ahayn oo ku saabsan warshadaha, oo ay ku jiraan maqaallo ku yaal New York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, iwm. Geesi ku filan oo aan kula wadaagi karo magacyadooda iyo shirkadooda internetka.
Marka… PRDude ma aqbali karo aniga (hadda wuxuu igu eedeynayaa kor ku xusan inaan haysto raaco been abuur ah, sidoo kale). Taasi waa hagaag, runtii waxba igama gelin. Isagu ma ahan dhagaystayaashayda bartilmaameedka ah mana haysto wax tilmaam ah oo ku saabsan waxtarka guud ee suuqgeynta aan sameyneyno. In kasta oo uu ku riixayo war-saxaafadeedyo aan la magacaabin, waxaan natiijooyin u helaynaa macaamiisheenna oo aan kobcinaynaa ganacsiyadooda. Waxaan rajeynayaa in maalin uun uu awood u leeyahay inuu ka ganacsado makiinaddiisa makiinadda qoraalka oo uu runtii fiiriyo sida khadka tooska ah ee internetka uu u kobciyay habka aan ula xiriirno midba midka kale.
Tags: prpr adagsharaf lehsaxaafadeedxiriirka dadweynaha
Falanqaynta Bartaada Twitter-ka
28, 2011 at 10: 30 AM
Waxaan la yaabanahay intee in le'eg ayuu ahaa tan iyo markii ninkani waxoogaa waxbarasho sii waday? Professors waxay si adag u isku dayayaan inay ka takhalusaan fikirka "saxaafadeed" sii deynta waxayna ku adkeysanayaan in loogu yeero "warbaahin" sii deynta maxaa yeelay… si fiican… waxay u fulin kartaa wax kasta oo aad sheegtay, Doug.
29, 2011 at 3: 33 PM
Waxba kama haysto isticmaalka war-saxaafadeedka oo ah xeelad suuqgeyn ah. Waxa kaliya ee aan tilmaamayay waxay ahaayeen nuxurka sii deynta. Goorma ayey ahayd markii ugu dambeysay ee aad tifaftire ka dhigato joornaal ama soo saare barnaamij barnaamij, waxa ugu horeeya ee ay codsadaan waa warsaxaafadeed. Intaa waxaa sii dheer, markii aad u dirto war-saxaafadeed dabeecaddan ah siligga, waxaa loo dirayaa sanduuqyada tifaftirayaasha. Tani waa sababta tifaftireyaashu ay u leeyihiin nacaybkan loo qabo dadka PR ee qashinka diraya, marka run ahaantii, ay yihiin suuqleyda adeegsanaya adeeggan waxyaabo aan war ka ahayn. Intaas ayaan idhaahdaa. Haddii taasi tahay fikirka qadiimiga ah, ka dib iigu yeer iskuul hore, laakiin waxaan u maleynayaa inay waxyeello u geysaneyso wax ka badan caawimaadda marka aad u direyso warxumo wariyeyaasha in qof kasta oo maskax badhkiis garanaya aan weligiis la dabooli doonin Waan ka doodi karnaa tan aad rabto oo dhan, laakiin waxaan ka nimid xirfado kala duwan. Waan ixtiraamayaa kuwa aan u diro waxyaabaha aan iskudayo si aan u cadeeyo inay tahay wax ay u baahnaan lahaayeen. Waxay ku saabsan tahay dhisidda xiriiro aan qarxin email-ka adduunka. Sannad Wanaagsan!
29, 2011 at 6: 14 PM
PR Dude - Weli waxaan ka hadlayaa inay tahay "qashin" ama "ma ahan warar la sheego". Waxaan ka hadlay arin layaableh oo ku jirta qoraalkan - laakiin runtii way jiraan qaar. Waxay u muuqataa nooc ka mid ah 'suuqleyda iyo xiriirka bulshada' codka halkaas ka jira. Ku DK New Media xiriirka DittoePR waa war - shirkad dhaqameed PR ah oo soo baxday oo la shaqeysa hay'ad warbaahineed oo cusub. Iyo agency wakaalad warbaahineed oo cusub oo qiime aan caadi aheyn kaheleysa xiriirka bulshada.
Sababtoo ah uma maleynaysid inay tahay war la aqbali karo, macnaheedu maahan inaysan ahayn. Jawaabta war-saxaafadeedka waxay abuurtay jawaab aad u wanaagsan. Xaqiiqdii, taada ayaa ahayd dhaliisha kaliya ee dadweynaha ee aan heli karnay. Haddana, markale, marka lagu qiimeeyo meelaynta weyn ee aan helnay - waxay ahayd war ay qaddariyeen kuwa kale oo badan.
Waan ku faraxsanahay jawaabtaada runta ah ee wadahadalka, in kastoo!
29, 2011 at 6: 34 PM
Waxaan filayaa. Ma hubo waxa aad uga jeeddo meeleynta warbaahinta in kastoo. Wax kasta oo ku dhaca siligga waxaa qaata warbaahin u qortay adeegeeda, laakiin run ahaantii ma waxay ka dhigan tahay weriyuhu inuu joojinayo waxa uu sameynayo si uu u tebiyo wararka noocan ah. 1996, haa, 2011, maya. Waan layaabi lahaa haddii warbaahin saddexaad oo ixtiraam leh sida Indy Star ama xitaa ganacsiyo sida Adweek ama Ad Age ay siin doonaan muuqaalkan labaad. Haddii aad ku miiqday isbahaysi ama iskaashi, markaa waxaan arkayaa qiimaha warka. Degel dib u naqshadeyn kaliya kuma filna heerarka saxaafadda aragtidayda. Ma dhaleeceynayo taatikada, kaliya waxa ku jira. Haddana mar labaad, waxaan ugu jawaabayay fella kale ee aan ku qorin qoraalkaaga.
Nasiib darrose, suuqleyda iyo shayga PR wuxuu socday sanado sidaad ogtahay. Ma ahan in la xumeeyo, laakiin waan necbahay in la iigu sheego suuqgeeye. Waxaan u adeegnaa laba ujeedo oo muhiim ah laakiin kaladuwan oo loogu talagalay macaamiisha iyo noocyada ugu dambeyntii, isku ujeeddo. Dadka PR waxay si weyn ugu tiirsan yihiin cilaaqaadka lala dhisay tifaftireyaasha, soo saareyaasha, qorayaasha wax qora, iwm. Waana wax laga xumaado in la maqlo iyagoo noo sheegaya inay ku helayaan warar aan khusayn sanduuqyadooda. Waxaad blogger ku tahay booska suuq geynta. Miyaad sheeko ka wadi laheyd macaamil soo saaray degel dib u habeyn ah oo ku saabsan balooggaaga? Kuwee ayaad diyaar u tahay inaad wax ka qorto haddii degel kasta oo naqshadeeya degelkiisa uu bilaabo inuu soo diro war ku saabsan? Sidee ku go'aamisaa waxa muhiimka ah in laga qoro iyo waxa aan ahayn? Fadlan ii sheeg haddii aan waalanahay oo aan macno lahayn halkan. Waa ciidihii oo maalmo badan baa la cabbay. Farxad! 🙂
29, 2011 at 6: 39 PM
PR Dude: Jawaabtu waa sida aan u go'aamino waxa aan ka qorayo iyo waxa aan ku qorneyn. Haddii jawaabtu fiicantahay, waxaan sii wadeynaa istiraatiijiyadda. Haddii jawaabta ay xun tahay, waxaan helnaa mid cusub.
29, 2011 at 6: 51 PM
Mahadsanid. Waxaan kuu rajaynayaa wanaaga. I soo ogeysii markaad ku jirto Apple-ka Weyn waxaana kuu soo iibinayaa cabitaan. Dood majiraan kaliya qashin fiican. Sannad Wanaagsan!
Jan 3, 2012 saacadu markay ahayd 1:03 PM
Gabagabo aad u qabow dooda. Waan ku raacsanahay inay jiraan waxyaabo badan oo "cariiri ah" halkaas, laakiin waxaan u maleynayaa sii deynta furitaanka degelku inay fiicantahay, waana waxa aan ku ogahay inay tahay PR wanaagsan - taas oo kuxiran shirkadda, dhagaystayaasha, xarumaha laga sii daayo gebi ahaanba. Waxaan si buuxda uga dambeeya Douglas sii deyntiisa, laakiin waxaan oggolahay inaan ka taxaddarno xad-dhaafka sii deynta ah. Qaar baa wax walba qariya, waxayna qiimo dhac ku tahay jiritaankooda.
Jan 5, 2012 saacadu markay ahayd 1:49 PM
Dood weyn fellas, waana wax fiican inaad aragto laba qof oo ku heshiin kara inay diidaan ixtiraam! +1 labadiinaba!
Jan 13, 2012 saacadu markay ahayd 6:00 PM
Mahadsanid. Doug shaqsiyan ma aqaano, laakiin waxaan ogahay inuu yahay shaqsi lagu ixtiraamo mihnadiisa, meelkasta oo uu ka yimaadona, waa inaan dhamaanteen is ixtiraamnaa. Waxaan jeclaan lahaa in qof walba uu ku doodi karo qaab ilbaxnimo gaar ahaan musharixiinta madaxweynaha ama qof kasta oo u tartamaya xafiis la soo doortay. Waxaan qamaarayaa inaan arki doono weeraro badan oo xun iyo kuwo shaqsiyadeed maadaama doorashooyinka hordhaca ay kululaanayaan.